दशैँ बिदामा एनआईसी एशिया बैँकका कुन-कुन शाखा सन्चालन हुन्छन् ? « Lokpath
4 October, 2019 3:13 pm
दशैँ बिदामा एनआईसी एशिया बैँकका कुन-कुन शाखा सन्चालन हुन्छन् ?
प्रकाशित मिति :4October, 2019 3:13 pm
काठमाडौं । दशैँको समयमा सरकारी कार्यालय जस्तै बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुपनि बिदा हुने गर्दछन् । बैँक तथा वित्तिय संस्था बन्द हुँदा ग्राहकको लागी अफ्ठयारो पर्ने गरेको छ । त्यसै कुरालाइ मध्यनजर राख्दै दशैँको समयमा एनआइसी एशिया बैँकले बिभिन्न शाखा सन्चालन गरी ग्राहकहरुलाइ सेवा दिने भएको छ ।
यसैक्रममा एनआईसी एशिया बैङ्कको सामाखुशी, कमलादी, सातदोबाटो, महाराजगन्ज, न्युरोड खिचापोखरी, थापाथली, भक्तपुर र थानकोट शाखा असोज १८ गते खुला रहनेछन् ।
यस्तै सामाखुशी, कमलादी, पुल्चोक, खिचापोखरी, महाराजगन्ज र थापाथली शाखा १९ गते खुला रहनेछन् ।
यता धनगढी हस्पिटल लाइन, बुटवल, न्यूरोड पोखरा, दुलेगौडा, लिंकरोड मिरचैया, राजविराज, बर्दिबास, हरिवन, गौर, विराटनगर, धरान, चारपाने, हेटौडा शाखा २० गते खुल्नेछन् । न्यूरोड पोखरा, बाग्लुङ, बुटवल, नारायणगढ २२ गते खुला रहनेछन् । न्यूरोड खिचापोखरी, भक्तपुर, महाराजगन्ज अपरान्ह १ बजेदेखि ४ बजेसम्म खुला रहनेछन् भने अन्य शाखाहरु ११ देखि २ बजेसम्म खुला रहनेपनि बैँकले जनाएको छ ।
एन आई सी एशिया बैंक ‘नागरिक पेन्सन योजना’ मा एस्क्ल्युसिभ बैंकिङ्ग पार्टनरको रुपमा नियुक्त
काठमाडौं । सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने, त्यस्तो बचतलाई देशको आर्थिक विकासमा
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठसहित ५ उच्च अधिकारीमा देखियो कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसहित राष्ट्र बैंकका ५ जना